3 Qaabdhismeedka WordPress ee Jawaab-celinta Bilaashka ah. Abuurista khadka tooska ah
Lua louro | | habyaalada, WordPress
In kastoo ay jiraan kumanaan Mawduucyada WordPress bixinta tayada sare leh (qiimaha wuxuu u dhexeeyaa $ 30-50, kan ugu badan); sidoo kale waxaa jira kuwo bilaash ah. Runtii waxa adag waa in la helo.
Qoraalkan waxaan ku keenaynaa 3 sheybaar bilaash ah loogu talagalay WordPress-kaaga. Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay iyaga waxaana lagugu dhiirigelinayaa inaad tijaabiso oo aad noo sheegto haddii aad ka heshay.
Laba mawduuc iyo laba menu-sare, oo loo caleemo saaray sawir-qaade. Qeybaha yaryar ee maqaallada ayaa ka muuqda bogga ugu weyn. Tiirka saxda ah waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo qaybaha kala duwan ee qoraallada.
Sharci yaqaan WP
Saddex mawduuc mawduuc iyo liiska kore, oo leh slider ku fadhiya 100% ballaca bogga. Qaab dhismeedka saddexda sadar ayaa loo beddelaa iyadoo kuxiran qaybta bogga aan ku jirno: xagga sare ee bogga, kaliya waxaan aragnaa hal tiir; ka dibna enum oo adeegsanaya dhammaan saddexda tiir, iyo ugu dambeyntii blogka, oo lagu soo bandhigo laba tiir.
Mawduuc ku habboon oo ka kooban qaybo loogu talagalay blog, faylalka, dukaanka, la xiriir ...
Sawirku waa muhiimad weyn, maadaama lagu soo bandhigay shaashadda dhammaan bogga ugu weyn. Sidaa darteed, waxaan kugula talinayaa template-kan sawir qaadayaasha, hal abuureyaasha, sawir qaadayaasha, naqshadeeyayaasha alaabada, sawirada ama moodada ... Maaddaama ay soo bandhigi karaan waxa ay qabtaan iyo, isla markaa, iibinta taranka iyada oo loo marayo dukaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » habyaalada » 3 Qaabdhismeedka WordPress ee Jawaab-celinta Bilaashka ah
Waad salaaman tahay, waxaan isku dayay inaan soo dejiyo shaxanka cagaha weyn laakiin markaan emailkeyga dhigo oo aan gujiyo soo dejinta, waxay muujineysaa in xiriirka soo dejintu uu ka muuqan doono emaylkeyga, laakiin waxba ma dhacaan, waxaan jeclaan lahaa inaan helo shaxdan, si aan u arko wuu i caawin karaa.
Salaan! Hadday gmail ahaan u shaqeysay si qumman, yahoo ay igu qaadatay muddo aad u dheer, waad mahadsan tahay!